राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न सक्षम छु, एक माैका देउः प्रदीप हुमागाईं (भिडियाे अन्तरवार्ता) | Neplays.com
नेप्लेज । पाँच वर्षको अन्तरालपछि भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लव च्याम्पियन बन्यो । मनाङका प्रशिक्षक थिए सुमन श्रेष्ठ । शीर्ष डिभिजनको क्लब सम्हालेको पहिलो अनुभवमै सुमनले मनाङ्लाई उपाधि जिताए । यसअर्थमा उनलाई भाग्यमानी प्रशक्षिक भन्न सकिन्छ ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग २०६९ । ६ वर्षअघि भएको ए डिभिजन लिगमा थ्रीस्टार क्लब च्याम्पियन बन्दा उसको प्रशिक्षकको पहिलो अनुभव थियो । प्रदीप हुमागाईं ।
ए डिभिजन लिगमा केही खेल सकिएपछि थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले राजीनामा दिए । र, उनको स्थानमा प्रदीप हुमागाईंले टिम हेर्ने मौका पाए । १५ खेलमा एघार जीत, दुई बराबरी र दुई हारको नतिजा निकाल्दै थ्रीस्टार च्याम्पियन बन्यो । आफुलाई सफल प्रशिक्षक प्रमाणित गरेर प्रदीप आफ्नो स्थान सुधार्न भनेर अमेरिका हानिए ।
नेपालमा भएको एएफसी ए लाइसेन्स प्रशिक्षक परीक्षामा पनि उनले टप गरे । अमेरिकाको किस्टान एथलेटिकका मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिरहेका प्रदीपले इंग्ल्याण्डको वेष्टह्याम युनाइटेड एकेडेमीमा डिप्लोमा कोर्स गरे । अमेरिका र बेलायतको फुटबल परिचित बनाइसकेका प्रदीप अहिले अष्ट्रेलियामा फस्र्ट डिभिजन क्लब प्रशिक्षण गर्नका लागि ढोका खोलिसकेका छन् । तर, नेपालको माया अझ पनि मनमा छ ।
अब प्रदीपको एउटा लक्ष्य नेपालको राष्ट्रिय टिम, पुरुष होस वा महिला, त्यसलाई सम्हाल्ने ठूलो इच्छा छ । अहिले प्रदीप नेपाल फर्किएका छन् । नेपाल फर्किएका बेला नेप्लेजले उनीसँग एउटा अन्तरवार्ता गरेको थियो ।
थ्रीस्टारलाई लिग च्याम्पियन बनाउनु भयो, तर नेपाल छोडेर अमेरिका जानुभयो । किन ?
नेपाल छोडेर गएको भन्दापनि आफूलाई अपग्रेड गराउने सिलसिलामा थप प्रशिक्षणका लागि अमेरिका गएको हो । मलाई सिक्ने भोक थियो । जसका कारण अन्तिममा नेपालमा नै आएर सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो । फुटबलमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई बोकेर अमेरिका गएको हुँ ।
अमेरिका गएर कतिको अपग्रेड गर्नु भयो त ?
थ्रीस्टार मेरो डेब्यू क्लब थियो । त्यतिबेलाको लिगमा मैले जे कुरा प्राप्त गरेको थिएँ, त्यो मेरा लागि पर्याप्त थिएन । अहिले म सिस्टमेटिक देशमा छु । त्यहाँ फुटबलदेखि लिएर सबै कुरा सिस्टममा चल्छ । त्यहाँ क्लबले पनि कोचको ब्यक्तित्व, प्रशिक्षण सिप, प्रोफाइल विकास गर्नका लागि दिने प्राथमिकता मजस्ता प्रशिक्षकका लागि प्रेरणको पक्ष पनि हो ।
त्यहाँको अनुभवका कारण मैले धेरै कुरा सिकिरहेको छु । विश्वको आधुनिक फुटबलसँग आफूलाई अपडेट गरेको छु ।
अष्ट्रेलियामा पनि शीर्ष डिभिजनमा प्रशिक्षण गर्ने वातावरण मिलाइरहनु भएको छ । त्यहाँसम्म कसरी पुग्नुभयो ?
अमेरिकामा हुँदा पनि म नेपाली फुटबलमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नजिकै थिएँ । नेपालमा हुने विभिन्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएको थिए । ए लाइसेन्स प्रशिक्षकमा परीक्षामा म प्रथम भएँ ।
अष्ट्रेलिया एसियाली फुटबल महासंघ अन्तर्गत रहेका कारण र विश्व फुटबलमा आफूलाई परिचित बनाउने मौका पाउनका लागि एसिया टेक्नु पर्ने थियो ।
प्रो–लाइसेन्स (माथिल्लो स्तरको) का लागि अखिल नेपाल फुटबल संघमा पनि महल गरेँ । तर चित्त बुझ्दो जवाफ पाइएन । त्यसैले आफ्नो करियरका लागि अष्ट्रेलियामा सम्पर्क बन्यो । त्यहा मसँग मेरो प्रमाणपत्रहरु मागियो । प्रकृयाका लागि केही समय लाग्यो । तर, केही समयअघिमात्र मलाई त्यहाँको फुटबल फेडेरेसनले शीर्ष डिभिजनमा प्रशिक्षण गर्न पाउने गरी मेरो लाइसेन्सलाई मान्यता दियो ।
म महत्वाकांक्षी स्वभावको भएका कारण अष्ट्रेलियाको बाटोले कतै पु¥याउँछ की भनेर त्यतातिर लागेको हुँ ।
नेपालको पुरुष होस वा महिला राष्ट्रिय टिम वा उमेर समूहको टिम होस । जुन भूमिका दिएपनि योगदान दिन तयार छु । किनभने म नेपालका लागि केही गर्न भोको छु ।
ए लाइसेन्स टप गर्नु भयो । टपरलाई एन्फाले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
नेपालमा भएको एएफसी ए लाइसेन्स परीक्षामा प्रथम भएको ब्यक्तिलाई कुन स्थान दिनुपर्छ भनेर एन्फाले उत्तर दिनु पर्ने हो । तर ब्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिन भोको छु । केही समयअघि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दा राष्ट्रिय टिम सम्हाल्नका लागि म तयार छैन भनेको थिएँ । ए लाइसेन्स कोर्ष गरेका थिइनँ ।
नेपाली फुटबलमा एक–दुई दशक योगदान दिइसक्नु भएका प्रशिक्षकहरु भन्दा राम्रो अंक ल्याएर पास भएको छु । यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरुले मलाई कुनै स्थान दिनु हुन्न भने नेपाल भनेर बसिरहन सक्दिन ।
नेपालको पुरुष होस वा महिला राष्ट्रिय टिम वा उमेर समूहको टिम होस । जुन भूमिका दिएपनि योगदान दिन तयार छु । किनभने म नेपालका लागि केही गर्न भोको छु । जता गएपनि मलाई नेपाल प्यारो छ ।
मैले नेपालका लागि केही गरेँ भने नेपालका लागि पनि केही फाइदा हुन्छ र मेरो ब्यावसायिक करियरलाई पनि फाइदा हुन्छ । तर मैले राम्रो प्रशिक्षण गर्न सकिन भने जिम्मेवारीबाट सहजै राजीनामा दिन पनि तयार छु ।
ममात्र होइन । नेपालमा अन्य केही प्रशिक्षक पनि छन् जो सक्षम छन् । कुमार थापाले धेरै मेहनत गरिहेको छ । नवीन न्यौपाने पनि अब्बल छन् । उनीहरुले किन मौका नपाउने ?
अहिले मछिन्द्रका पूर्व प्रशिक्षकलाई भित्राउने कुरा भइरहेको छ । उनकाे प्रशिक्षणमा मछिन्द्र दोस्रो भएको थियो । त्यसबेला मनाङलाई लिग च्याम्पियन बनाउने प्रशिक्षकले के सोचिरहेका होलान् ?
विदेशी प्रशिक्षक खोजिरहेको एन्फालाई म पनि सक्षम छु भनेर भन्नु भएन ?
मैले अनौपचारिक रुपमा यो कुरा राखेको छु । प्रयत्न चाहीँ गरिरहेको छु । एन्फामा आएको नयाँ कार्यसमितिलाई पनि मेरो इच्छा ब्यक्त गरिसकेको छु ।
मैले म किन आवस्यक छु भनेर उदाहरण दिएरै भनेको छु । पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय टिम सम्हालेका प्रशिक्षक रिचर्ड ओर्लोस्की किस्टोन एथलेटिक–जहाँ म प्रशिक्षण दिइरहेको छु, त्यो क्लबको प्रशिक्षक थिए । जो त्यहाँबाट बर्खास्त भए ।
अहिले मुख्य प्रशिक्षकका रुपमा उसको भुमिका मैले निभाइरहेको छु । यो उदाहरण मैले एन्फामा दिएको छु । एन्फाले अहिले पनि रिचर्डसँग कुरा गरिरहेको थियो ।
एन्फाले बर्खास्तीमा परेका अमेरिका प्रशिक्षक ल्याउनका लागि पहल गर्दै गर्दा उ भन्दा माथिल्यो पोजिसनमा रहने म नेपाली प्रशिक्षकले किन राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न नसक्ने ?
नेपालका पूर्व सहायक प्रशिक्षक रिचर्डसँग हुमागाइ
अहिले मछिन्द्रका पूर्व प्रशिक्षकलाई भित्राउने कुरा भइरहेको छ । तर त्यसबेला मछिन्द्र दोस्रो भएको थियो । त्यसबेला मनाङलाई लिग च्याम्पियन बनाउने प्रशिक्षकले के सोचिरहेका होलान् ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता प्रो–कोर्स गर्ने हो । एन्फाको सहयोगविना यो गर्न गाह्रो छ । त्यसका लागि एन्फासामू भिक माग्न तयार छु । मलाई बरु केही पनि चाहीँदैन । पढ्ने मौका देउ ।
कुनै बेला नेपाली फुटबलले मेरो आवस्यकता महसुस ग¥यो भने एक सेकेण्डमा अमेरिका छोडेर आउँछु ।